actus - vaovao Mada: Famakafakana Valim-pifidianana - Takariva
publié le 26/10/2013 - 12h20, par TAKARIVA / Takariva Webmaster
Election Mada-Afro Page
Mandroso isika sa Mihemotra ?
Betsaka no manontany tena androany hoe inona no mitranga .
miaina zavatra tahaka ny efa niainana , na hoe "Illusion du déjà vu" , ny taona ve sa ny havizanana sa ny Stress ?
Mihodikodina ny fiainan-draMalagasy , dia mifanotany ny tsirairay hoe , mandroso isika sa mihemotra ?
Toa zavatra efa niainako ity miverina iainako anio ity , fakafakantsika no mety mahatonga izany rehetra izany
Hanao jery todika kely vetivety ny lasa ary isika :
Ny fanongam-panjakana dia efa nanomboka tamin'ny taona 1975 teto Madagasikara, tamin'ny fanesorana an-dRatsimandrava izay nodimbiasin'i amiraly Didier Ratsiraka .
Nanjaka nadritra ny 16 taona ity farany .
Nifarana tamin'ny 1993 raha nanomboka ny fitokonan'ireo mpanohitra tamin'ny taona 1992.
Niverina moramora izy tamin'ny taona 1997, rehefa voaalan'ny antenimiera tsy hitondra intsony ny profesora Zafy albert .
"Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina" : tafaverina tsy fidiny teo amin'ny fitondrana ny Amiraly Didier Ratsiraka tamin'ny 1997 rehefa avy nanao sesin-tany tao Frantsa .
Efa nanomboka nizarazara ireo mpanohitra, nidina ny farim-piainan'ny vahoaka , raha atao fijery tsotsotra dia naleon-draMalagasy nitady ilay farim-piainany teo aloha .
Fomba fijerin'olon-tsotra tsy mpanaraka politika (taona 1996 ) , aleonay miverina amin' i Ratsiraka satria nitombo avo telo heny ny vidin'ny hena kisoa tamin'ny andron'ny Zafy .
Latsaka an-kady ny fiainany , tsy manam-potoana hieritreritra izay niseho tamin'ny 10 aout , tsy nandany andro hamakafaka ny sandambola tamin'izany andro izany .
2002 : Amiraly Ratsiraka niala tsy fidiny teo amin'ny toerany taorian'ny fidrikinan'ny antoko Ravalomanana ny fandresena tamin'ny fifidianana
2009 : Fanonganan'ny TGV tamin'ny tosiky Ratsiraka an'i fitondran'ny antokon-dRavalomanana .
Tetezamita niitatra efatra taona , ary tafahitsoka tao anatin'ny kirizy
Fifidianana 2013 : Mitana ny lohalaharana ny antoko Avana izay nampiasa ny loko, ny sarin'ny filoha teo aloha , ny faneva sy ny mpanankanto BODO , eny na ny fisian'ny Mme Lalao Ravalomanana teo anilany aza . Izany hoe niverina niaina ireo fampielezan-kevitra tamin'ny taona 2001 sy 2006 ireo mpomba azy .
De hitovy sahala ve ny hodiavintsika ?
Ny Malagasy tsy tia teritery , leo ireo didy jadona nentin'ny Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro , no nampidina azy ireo an-dalambe .
fanontaniana tsy voatery valiana : nety ve sa tsia ny faripiainan'ny malagasy tamin'izany andro izany ? dia manotania tena ny tsirairay hoe ny vahoaka noana ve afaka mitokona ?
Androany inona no mety hiseho :
Tetezamita nampanantena fiainana tsaratsara kokoa noho ny teo aloha satria nitsikera fatratra ny fitondran-dRavalomanana, efa-taona aty aoriana , mitohy ny savorovoro politika , maro ny very asa , nanampy trotraka ny kirizy eran-tany, latsaka an-kady ny firenena, mahantra sy noana ny vahoaka . raha manao vinavina ny olon-tsotra dia hoy izy hoe : raha miverina ravalomanana, miverina Tiko, midina ny vidin'ny yaourt, dobera, ny menaka sns , amin'izy ireo midina ny vidim-piainany . Ho an'ireo tantsaha , aleon'izy ireo ihany koa miverina amin'ny taloha, satria na tsy izy ireo aza no mamaritra ny vidi-ketsa , mba nisy nividy ihany ireo vokany tamin'ny androny .
Mafy ny fiainana : efa tsy zatra nijery fandaharan'asa ny malagasy amina fampielezan-kevitra , na olona aza ankehitriny efa tsy jerevany intsony, fa fianana sisa no azony andrandraina sy ampitahaina . Dia ho aleony ve hiverina amin'ilay taloha satria tsy manana hery tsony hanandramana vaovao .
Izany ve no atao hoe "Mitsambiki-mikipy "
Miandry ny valim-pifidianana farany sy ny fihodinana faharoa dia ho hitantsika eo indray ny tohiny ...
madagasikara malagasy ravalomanana vaovao